यी हिरोइन जसले फिल्ममा क्यामरा अगाडी साच्चिकै बच्चा जन्माइन र बिबादमा पनि फसिन! - inaruwaonline.com
यी हिरोइन जसले फिल्ममा क्यामरा अगाडी साच्चिकै बच्चा जन्माइन र बिबादमा पनि फसिन!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १७, २०७३ समय: १२:११:५८
१७ बैशाख, एजेन्सी । फिल्मका लागि कलाकारहरू नयाँनयाँ प्रयोग गर्छ। उनीहरूले गर्ने प्रयोगले सधै समर्थन बने जुटाउँदैन्। सन् २०१३ मा रिलिज भएको एक भारतीय फिल्म कलाकारको एक कामका कारण विवादमा फस्यो। फिल्मका लागि फिल्मी अभिनेत्रीले क्यामरा अगाडी साँच्चिकै बच्चा जन्माइन्।मलयालम भाषामा बनेको ‘कालीमन्नु’ फिल्मकी मुख्य अभिनेत्री स्वेता मेननले फिल्मको दृश्यका लागि आफू गर्भवती हुँदाको क्षणलाई क्यामरमा कैद गराएकी थिइन्। उनको यो कदमको भारतको केरेला राज्यमा चर्को विवाद र बहस भयो।
फिल्मका लागि करिब २५ मिनेटको फुटेज खिचिएको थियो। डेलेभरी कोठामा तीनवटा क्यामरा लगाइएको थियो। स्वेताको प्रशव चलिरहँदा सो कोठाभित्र मेडिकल टोलीबाहेक निर्देशक बेल्सी, स्वेताका श्रीमान, दुई छायाँकार बसेका थिए।कुनै पनि भारतीय फिल्मका लागि त्यसो गरिएको पहिलो अवसर थियो। सो कदमको विरोधको जवाफमा स्वेताले महिलाको अवस्थाका बारेमा पुरूषले पनि बुझुन र महशुस गरून भनेर आफूले उक्त कदम उठाएको बताएकी थिइन्।रिलिज पश्चात फिल्मले मिश्रित प्रतिक्रिया बटुलेको थियो।